Sidee Loogu Diiwaan Galiyaa Martida Maxaliga Ah Ee Soo Dhaweyntaada H6 Iyadoo Martida Fog Ee Garageband | Martech Zone
Haddii aad doonayso inaad si dhab ah uga hadasho Podcasting-ka, runtii waxaan kugu dhiirigelin lahaa inaad keydiso Dhaweeye H6 Rikoodh. Kaliya waa aalad fudud oo u baahan tababar la'aan in lagu duubo. Ku dar qaar Shure makarafoonnada SM58, la qaadi karo makarafoonka ayaa istaaga, oo waxaad leedahay istuudiyaha aad ka qaadan karto meel kasta oo aad cod fiican ka heli karto.
Si kastaba ha noqotee, halka tani ay u fiicantahay Podcast-ka halkaasoo martidaada oo dhan ay kula socdaan, martida fog ee martida ah ee websaydhka runti way adkeyneysaa arrimaha. Dhibaatadu waa daahid maqal oo shabakadda laga soo mariyo. Hadaad kaliya kumbuyuutarkaaga ku xidhatay martida martida ah, martida ayaa heli doonta dhawaq xun oo codkooda ah. Caadi ahaan, shaqada ku saabsan tan waa in la iibsado a fiicni ka dibna waxaad u habeyn kartaa basas badan with mid ka mid ah dhammaan martidaada deegaanka, ka dibna mid walba leh. Waad ku ridi kartaa baskaaga maxaliga ah laptop-kaaga, ka dibna isticmaal baska kale si aad wax walba u duubto.
Laakiin ka waran haddii aadan haysan wax qas ah ama aadan rabin inaad mid ku wareegto? Wax badan baan sameeynayay podcasting fog oo aan go aansaday in aan xiro kuweyga Istuudiyaha 'Indianapolis Podcast'. Si kastaba ha noqotee, wali waxaan duubaa marti badan oo fog, sidaa darteed waxaan u baahanahay inaan ogaado tan.
Waxaan iibsaday wax kasta oo aan u baahdo si aan istuudiyahayga ugu qaato wadada si aan wax ugu duubto dhacdo kasta ama xarun shirkadeed. Bannaanka laptop-ka bannaanka, dhab ahaan kuma bixin qarash dhan hal tan, sidoo kale. Waxaan aaminsanahay in dhammaan fiilooyinka, kala-qaybiyeyaasha, sameecadaha dhagaha, Zoom H6, iyo boorsadayda ay ku kacday qiyaastii $ 1,000. Taasi waa qayb yar oo ka mid ah hantidii yareyd ee aan ku isticmaali lahaa istuudiyadeyda… waxaana igu adkaa waqti maqalka wax faraq ah oo tayo leh!
Duubista Garageband IYO Zoom H6
Khiyaanada qaab-dhismeedkan ayaa ah inaan ku duubi doonno mid kasta oo ka mid ah shakhsiyadeena martida ah goobta loo yaqaan 'Zoom H6', laakiin waxaan ku duubi doonnaa martida fog meesha ay ku sugan yihiin Garageband. Taasi waa sababta oo ah waxaan u baahanahay maqalka wadarta guud ee martidayada oo dhan inay ku tuuraan Skype (ama barnaamij kale) iyaga oo aan ku quudinaynin codkooda iyaga oo leh echo. In kasta oo ay tani runti u muuqato mid murugsan, waa kuwan dulmar guud ee tallaabooyinka:
Si sax ah u silig sameecadahaaga, mics, zoom, iyo laptop-kaaga.
U habee Soundflower si aad u samayso qalab maqal ah oo muuqaal ah oo lagu duubay wacaha Garageband.
U diyaari mashruuc Garageband ah Skype iyo Zoom-kaaga oo ah shaqsiyaad kuu gaar ah.
Dejiso dejimaha maqalka ee Skype si aad ugu isticmaasho Soundflower inuu kuu noqdo afhayeenkaaga.
Ka bilow duubista Garageband, ka bilow duubistaada 'Zoom', oo wicitaankaaga samee.
Ka dib markaad dhammeyso, keen Zocks Tracks mashruucaaga Garageband oo wax ka beddel faylkaaga.
Tilaabada 1: Iskuxirka Zoomkaaga iyo Laptop-kaaga
Xusuusnow, waxaan u adeegsaneynaa soo saarida zoomka baska wax lagu soo daro ee wicitaankeena Skype, markaa waxaad u adeegsan doontaa Zoom qaab caadi ah… oo aadan uga sii gudbin USB-ga Garageband.
Ku xir a sameecadaha dhagaha / dhagaha aad Mac.
Ku xir a 5-way qaybiye headphone hal dhinac oo kala qaybiyaha ah. Waxaan u maleynayay inaan u baahanahay amp sameecad yar, laakiin tani si fiican ayey u shaqeysay!
Ku xir dhinaca kale ee kala-qaybiye adiga nambarka dhegaha ku dhaji Zoom H6 adoo adeegsanaya xariga labka / labka ah ee la yimid kala qeybiyaha dhagaha.
Ku xidhnow mid kasta oo ka mid ah fiilooyinkaaga XLR mikrofoonkaaga Wax-soo-saarka Zoom.
Ku xir mid kasta oo ka mid ah headphones ilaa 5-way qaybiye. Waxaan u adeegsadaa samaacado raqiis ah martida ka dibna waxaan ku dhejiyaa sameecadaha dhagahayga xirfadleyda ah si aan u hubiyo in codka uu fiicanyahay.
Tallaabada 2: Ku rakib Soundflower oo Samee Qalab Farsamaysan
Download iyo rakibi Dhawaaqa codka, kaas oo awood kuu siinaya inaad ku samayso qalab maqal ah oo muuqaal ah Mac-gaaga.
Adeegso Audio Midi Setup si aad u abuurto qalab wadar ah oo wadooyinkiisa gaarka ah ku yeelan kara Garageband. Waxaan wacay Podcasting-keyga waxaanan adeegsaday makarafoonka ku dhex jira (oo ah meesha ay dhagaha dhagaha ku soo galaan) iyo Soundflower (2ch).
Talaabada 3: Deji Mashruuca Garageband
Fur Garageband oo bilow mashruuc cusub.
U gudub dookhyadaada Garageband-ka oo xulo Podcasting sidaada Qalab gelinta oo ka tag wax soo saar lagu dhisay sida aaladda wax soo saarkaaga.
Hadda ku dar dariiq oo leh wax ku dar 1 & 2 (Podcasting) oo ah gelinta 3 & 4 (Podcasting). Hal wado wuxuu noqon doonaa codka soo socda ee Skype kan kalena wuxuu noqon doonaa wax soo saarkaaga Zoom (oo aadan u baahnayn inaad isticmaasho tan iyo markii aan duubno jidad shaqsiyeed oo ku saabsan Zoom H6). Waa inay u egtahay sidan:
Tallaabada 4: Deji Skype
Skype dhexdeeda, waxaad u baahan doontaa inaad ku dhajiso afhayeenka qalabkaaga aaladda, Cod-bixiye (2ch) iyo makarafoonkaaga Makarafoonka Gudaha (taas oo ah soo-saaridda Zoom H6 ee makarafoonkaaga).
Geli dhagahaaga dhegaha, samee a Wicitaanka tijaabada Skype, oo hubi in heerarka maqalkaagu fiicanyahay!
Tallaabada 5: Ku duub Garageband iyo Zoom labadaba
Ku tijaabi heerarka makarafoonkaaga Zoom iyo diiwaanka saxaafadda si aad u bilowdo duubitaanka martidaada deegaanka.
Tijaabi heerarkaaga maqalka ee Garageband iyo diiwaanka saxaafadda si aad u bilowdo duubista wicitaankaaga Skype.
Samee wicitaankaaga Skype!
Tallaabada 6: Tafatir Podcast-kaaga
Hadda oo aad dhammaatay, kaliya ka soo dhoofso raadiyahaaga maqalka Zoom-kaaga, ka aamus wadaddaada wadarta, oo wax ka beddel qoraalkaaga.
Dhammaan waad dhammaysay!
Ogeysiiskii ugu dambeeyay, waxaan helay an bac garabka la yaab leh taasi waxay ku habboon tahay dhammaan fiilooyinkeyga, Dhaweydkeyga, makarafoonkeyga, istaagga, iyo xitaa seddex safar iyo kiniin haddii aan doonayo inaan si toos ah u soo galiyo. Waxaan ugu yeeraa tayda podcast Boorso Bax… Asal ahaan istuudiyo dhan oo Podcast ah oo ku jira hal bac, suuf leh, bac aan biyuhu diidi karin oo aan meel kasta keeni karo.
Shaacinta: Waxaan isticmaalayaa xiriiriyeyaasheyda xiriirka la leh maqaalkan.
Tags: Amazonbelkinboorso tagkala-baxa madaxaheadphoneskala qaybiyemik taaganboorsada Podcastistuudiyaha Podcastbacda garabka gelinayaIstuudiyaha Podcast ee la qaadi karoistuudiyaha la qaadan karoSkypeSonyzoomzoom h6
Haa, Weli Waxaa Jira Blogs Weyn Oo Halkaas Jooga Oo La Ogaado… Waa tan Sida Loo Raadiyaa
6 Fikradaha Suuqgeynta Mawduuca Miisaaniyadda ee Ganacsiyada Yaryar